ကုမ္ပဏီအပေါ်သုံးသပ်ချက် - အေတီအေဒီ သံမဏိကိုယ်ထည် အဆောက်အဦး ကော်ပိုရေးရှင်း
(+95) 11 222 573
အမြင်၊ ဦးတည်ချက်နှင့် အလေးထားမှုများ
ဆောက်လုပ်မှုအကြို အဆောက်အဦးများနှင့် မိတ်ဆက်ခြင်း
ဆောက်လုပ်မှုအကြို အဆောက်အဦး ပုံစံများ
ပညာရေး ၊ အနုပညာနှင့် အားကစား
လေယာဉ်ထုတ်လုပ်မှု စက်ရုံ ၊ မြေအောက်မီးရထားလမ်း
ရုံအဆောက်အဦး ၊ ပြခန်း
ဂိုဒေါင် နှင့် အအေးခန်းသိုလှောင်ရုံ
စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ နှင့် သတ္တုဗေဒ
စက်သုံးဆီ၊ ဓါတ်ငွေ့နှင့် ဓါတုဗေဒပစ္စည်းများ
အခြေခံအဆောက်အဦးများ နှင့် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး
သဘောသဘာဝ နှင့် အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်
လျော်ကြေးငွေနှင့် အကျိုး ခံစားခွင့်များ
ဝန်ထမ်းအင်အား ထိန်းချုပ်မှု ဖွဲ့စည်းပုံ
အတေီအဒေီသညျ အရညျအသှေးမွငျ့မားသော အငျဂငျြနီယာ သံမဏိအဆောကျအအုံနှငျ့ သံမဏိကိုယျထညျမြား တညျဆောကျခွငျးနှငျ့ တိုငျပငျခွငျး၊ ဒီဇိုငျးဆှဲခွငျးအစရှိသော လုပျငနျးမြားအား ၂၀၀၄ ခုနှဈမှ စတငျ၍ ကမ်ဘာအနှံ့ရှိနိုငျငံပေါငျး ၄၀ တှငျ သံမဏိအဆောကျအဦး ၃၅၀၀ ကြျောကို အကောငျအထညျဖျောခဲ့သညျ။ ကုနျသညျမြား၊ စကျရုံမြား၊ ဂိုဒေါငျမြား၊ အထပျမွငျ့အဆောကျအဦးမြား၊ အကွီးစားစကျမှုလုပျငနျးမြား၊ ဈေးဝယျစငျတာမြား၊ ပွပှဲစငျတာမြား အစရှိသညျ့ ဆောကျလုပျမှုမြား ပွုလုပျခဲ့သညျ။
ATAD တှငျ အရညျအခငျြးပွညျ့ဝသော ဝနျထမျး ၂၂၀၀ ကြျောရှိပွီး အရညျအသှေးပွညျ့ဝသော နိုငျငံတကာ စီမံခနျ့ခှဲမှုစနဈ ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018 အစရှိသော အသိအမှတျပွုလကျမှတျမြား နှငျ့ စုစုပေါငျးဧရိယာ 211,000 m2 အကယျြအဝနျးရှိသော ခတျေမှီစကျရုံကွီး ၂ ခုကိုလညျး ပိုငျဆိုငျထားပါသညျ။ ကြှနျုပျတို့၏ စကျရုံမြားသညျကမ်ဘာပျေါတှငျ အကွီးမားဆုံးနှငျ့ အဆငျ့မွငျ့သံမဏိကိုယျထညျ ထုတျလုပျမှုစကျရုံမြား ဖွဈသညျ။ အထူးသဖွငျ့၊ ATAD Dong Nai စကျရုံသညျ အာရှတှငျပထမဦးဆုံးသော LEED GOLD အသိအမှတျပွုလကျမှတျနှငျ့ ဗီယကျနမျနိုငျငံတှငျ LEED ပလကျတီနမျအသိအမှတျပွုလကျမှတျရခဲ့သော စကျရုံလညျး ဖွဈပါသညျ။နှဈစဉျနှဈတိုငျးဖောကျသညျအရအေတှကျ တိုးမြားလာနပွေီး၊ ATAD သညျဗီယကျနမျနှငျ့ဂပြနျ၊ ကိုရီးယား၊ အမရေိကနျနှငျ့အီးယူတို့မှ ထိပျတနျးကနျထရိုကျတာမြား၊ အတိုငျပငျခံမြားနှငျ့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံသူမြား၏ ရရှေညျတညျတံ့သော မိတျဖကျဖွဈလာခဲ့သညျ။
– ဆောကျလုပျရေးကနျထရိုကျတာ: Kajima, Toda, Shimizu, Daiwa House, Penta Ocean, Coteccons …
– ဆောကျလုပျရေးအတိုငျပငျခံ: Haskoning, Toyo, Idco, Nagecco, Newcc, Archetype, Icic …
– ဖောကျသညျမြား – Pepsi ကုမ်ပဏီ၊ ကိုကာကိုလာ၊ Samsung၊ Unilever၊ Heineken၊ Nippon သံမဏိ၊ Colgate Palmolive …
ဗီယကျနမျနှငျ့ပွညျပတှငျ ATAD ၏ ပုံမှနျစီမံကိနျးအခြို့မှာ Vinfast Automobile Manufacturing Complex၊ Hoa Phat – Dung Quat သံမဏိစကျရုံ၊ ခရီးသညျဆိပျကမျး – Cam Ranh အပွညျပွညျဆိုငျရာလဆေိပျ, ခရီးသညျ Terminal – Da Nang အပွညျပွညျဆိုငျရာလဆေိပျ, ခရီးသညျ Terminal – Wattay အပွညျပွညျဆိုငျရာလဆေိပျ (Vientiane, Laos), Vinh Tan အမှတျ ၄ တိုးခြဲ့သညျ့ အပူစှမျးအငျစကျရုံ၊ ဟိုခြီမငျးမွို့ပွ မီးရထားလမျးစီမံကိနျး၊ long Son ရနေံဓာတုဗဒေစကျရုံ၊ Longwell ဖိနပျစကျရုံ၊ Brotex Fiber အရောငျစကျရုံ၊ Heineken ဗီယကျနမျ ဘီယာ၊ Taekwang ဖိနပျစကျရုံ၊ JFE Meranti Myanmar စကျရုံ၊ Lazada ထောကျပံ့ပို့ဆောငျရေးစငျတာ (အငျဒိုနီးရှား၊ ဖိလဈပိုငျ)၊ Metro Ayala Shopping Mall (ဖိလဈပိုငျ)၊ သီရိလင်ျကာရှိ အကွီးဆုံးသိုလှောငျရုံ – Camso Loadstar၊ ဆေးရှကျကွီး ထုတျလုပျမှုစကျရုံ (ဖိလဈပိုငျ)၊ Dangote Industries တနျဇနျးနီးယား အပူစှမျးအငျသုံး ဓာတျအားပေးစကျရုံ၊ Matarbari ကြောကျမီးသှေးသုံး ဓာတျအားပေးစကျရုံ (ဘင်ျဂလားဒရှေျ့) …. တို့ဖွဈပါသညျ။
အတေီအဒေီသညျ အငျဂငျြနီယာအကွိုအဆောကျအဦးမြားနှငျ့ သံမဏိကိုယျထညျ အဆောကျအဦးမြားအတှကျ အမွငျ့ဆုံးစှမျးဆောငျရညျကို ရရှိရနျ ဦးဆောငျသူအဖွဈဆုံးဖွတျသညျ။
ဘာကြောင့်အေတီအေဒီကို ရွေးချယ်သင့်သလဲ ?
အေတီအေဒီ သံမဏိထည် အဆောက်အဦးထုတ်လုပ် တည်ဆောက်မှု ကော်ပိုရေးရှင်းသည် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း၊ ပေါင်းစပ်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း၊ ဝယ်ယူမှုနောက်ပိုင်း ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းများ အပါအဝင် အကြီးစားသံမဏိထည် ဆောက်လုပ်မှုများနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးအကြို လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် အကောင်းဆုံး ပြီးပြည့်စုံသည့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိ ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ပေါင်းစပ် ဖွဲ့စည်းထုတ်လုပ်မှုများသည် ကောင်းမွန်သော ရလဒ်များ၊ အရည့်သွေးမြင့် ထုတ်ကုန်များနှင့် ကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုများကို ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဘယ်အရာတွေက ကျွနိုပ်တို့အား ထူးခြားစေတာလဲ ?
အများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သော အသက်သာဆုံးသော ဈေးနှုန်းများရရှိစေရန် အေတီအေဒီတွင် အဆင့်မြင့် အလိုအလျောက် ကိုယ်တိုင်ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ရေး စနစ်လိုင်းနှင့် အတူ အတွေ့အကြုံကြွယ်ဝသော ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများရှိခြင်း။
အေတီအေဒီသံမဏိထည် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် သုံးစွဲမည့် အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးကို နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု အရည်အသွေး စီမံခန့်ခွဲထိန်းချုပ်မှုစနစ် ISO 9001:2015 နှင့်အညီ ကိုယ်ပိုင်စက်ရုံတွင် ထုတ်လုပ်သည်။ အေတီအေဒီတွင် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်စစ်ဆေးသော ဌာနရှိပြီး သံမဏိထည်တည်ဆောက်မှု ထုတ်ကုန်များသည် နိုင်ငံတကာ စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသည်ကို အာမခံနိုင်ခြင်း။
၆၀၀၀ စတုရန်းမီတာ ကျယ်ဝန်းသော စက်ရုံနှင့် လေ့ကျင့်မှုပြည့်ဝသော ဝန်ထမ်းများမှ နိုင်ငံတကာဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်များသို့ ထုတ်ကုန်များ အလျင်မှီပေးပို့နိုင်စေရန်အတွက် ကူညီထောက်ပံပေးပြီး ထုတ်ကုန်များကို သတ်မှတ်သောကာလအတွင်း လုပ်ငန်းခွင်တည်နေရာသို့ ပို့ဆောင်နိုင်ခြင်း။
အဆောက်အဦးစီမံခန့်ခွဲမှု ဘုတ်အဖွဲ့သည် ဝယ်ယူသုံးစွဲသူများ၏ လိုအပ်ချက်များအား ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်အတွက် အဆောက်အဦး စတင်သည့်အဆင့်မှ ပြီးဆုံးသည့်အဆင့်အထိ ဝယ်ယူသုံးစွဲသူများနှင့် ပုံမှန်တွေ့ဆုံညှိနိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စီမံကိုန်းအဆောက်အဦးများအတွက် လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုနှင့် အာမခံဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ခြင်း။
အတွေ့အကြုံရှိပြီး မြင့်မားသောလေ့ကျင့်မှုများဖြင့် ပြည့်စုံသော ဒီဇိုင်းအဖွဲ့မှ ဝယ်ယူသူများထံသို့ အကောင်းဆုံး ရလဒ် များအား ခေတ်မှီနည်းပညာအကူအညီများနှင့် အတူ အကောင်းဆုံးတွက်ချက်မှုများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ ဒီဇိုင်းကျွမ်းကျင် ဘွဲ့ရနှင့် ဘွဲ့လွန်ပညာတက်မြောက်ပြီးသော အတွေ့အကြုံရှိ ဝန်ထမ်းများဖြင့် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားခြင်း။
အရည်အသွေးမြင့်မား ကောင်းမွန်သော ကုန်ကြမ်းများ အသုံးပြုခြင်း
ကုန်ကြမ်းတင်သွင်းသူများအား စီစစ်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ဥရောပ၊ ဂျပန် အစရှိသည့် နိုင်ငံများမှ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အေတီအေဒီ၏ ထုတ်ကုန်များကို အရည်အသွေးပြည့်မှီစေခြင်း။
အေတီအေဒီ လုပ်ငန်းအုပ်ချုပ်မှု ဖွဲ့စည်းပုံ ဇယားသည် ယခုလက်ရှိနှင့်အနာဂတ်အတွက် အမှန်တကယ် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်၍ ဖွဲ့စည်းထားသော တည်ဆောက်မှုဇယားဖြစ်ပါသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံဇယားနှင့်ပတ်သက်၍ အေတီအေဒီသည် ကောင်းမွန်သော အရည်အသွေးမှီထုတ်ကုန်များကို ဝယ်ယူ သူများထံသို့ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ATD Brochure - Korea
ATAD သညျ YIBEI ဗီယကျနမျ စကျရုံပရောဂကျြကို အပွီးသတျခဲ့သညျ။ May 20, 2022
ATAD သညျ ဗီယကျနမျနိုငျငံ၏ တိုးတကျမှုအကောငျးဆုံး ထိပျတနျး 50 တှငျ5နှဈဆကျတိုကျ အမှတျအသားပွုပါသညျ။ May 20, 2022
ပါတီဗဟိုကျောမတီအဖှဲ့ဝငျ၊ ဒေါငျနိုငျခရိုငျပါတီကျောမတီ အတှငျးရေးမှူး NGUYEN HONG LINH ATAD DONG NAI စကျရုံသို့ သှားရောကျလလေ့ာခဲ့သညျ။ May 20, 2022
(+84) 28 3926 0666 ဆက်သွယ်ရန် ATAD